Sheekh Maxamed Garyare: Xarakada Al-Islaax Ma Lahan Musharax Madaxweyne (Dhageyso Wareysi) | RBC Radio	Home
Tuesday, October 2nd, 2012 at 01:58 am	/ 5 Comments Wednesday, June 13th, 2012 at 06:43 am Sheekh Maxamed Garyare: Xarakada Al-Islaax Ma Lahan Musharax Madaxweyne (Dhageyso Wareysi)
Muqdisho (RBC) Sheekh Maxamed Axmed Nuur [Garyare] oo kamid ah masuuliyiinta Xarakada Al-Islaax oo ka mid ah ururada islaamiga ee Soomaaliya ayaa wareysi uu siiyey Shabakada Raxanreeb wuxuu ku cadeeyay in Xarakada Al-Islaax aysan lahayn cid musharax u ah jagada madaxweynaha Soomaaliya.
Wareysiga Sheekh Maxamed Garyare wuxuu ku sheegay in xaalada hadda wadanku ku jiro iyo duruufaha heysta dadka darteed aysan Xarakada Al-Islaax qorshaha ugu jirin inay ka qeybgasho tartan siyaasadeed doorashada madaxweynaha ee lagu wado in Agoosto 2012 ay ka dhacdo Muqdisho.
“Iyadoo la fiirinayo xaaladu wadanku marayo iyo duruufta jirta… iyo xaalada xarakadu mareyso. Xukuumad dhisan oo xor ah oo arinteeda gacanteeda ku heysata oo la tartami karo oo axsaab iyo saxaafad jiraan, markaas weeye markay Xarakada Al-Idslaax isa soo bandhugeyso.”ayuu yiri Sheekh Maxamed Garyare.
Sheekh Maxamed Garyare oo Raxanreeb ay weydiisay inay diidan yihiin shakhsi gaar ah oo ururkooda ka tirsan ayaa sheegay inaysan jirin shakhsi gaar ah oo ay diidan yihiin laakiin gei ahaanba ay go’aansadeen in siyaasadda Soomaaliya ay ka qeybgalin.
“Waxaa keenay in aan hadda ka hadalno iyadoo suuqa la geliyey in Xarakada Al-Islaax ay tartanka kujirto.. taasaan saxeynaa” ayuu sii raaciyey.
Bisha Agoosto ee soo socota ayaa ah mudada loo ballansan yahay in doorasho madaxweyne oo ka dhacaysa gudaha baarlamaanka oo kaliya ay ka dhacdo Muqdisho, isla markaana xukuumad iyo madaxweyne cusub la sameeyo, waxaana dhanka kale sii badanaya tirada musharixiinta kala duwan ee isu sharaxeysa jagada madaxweynaha.
Waxaan Sheekh Maxamed Garyare wareysiga ku weydiinay sida urur ahaan Al-Islaax ay u arkaan dhaqdhaqaaqyada hadda dalka ka socda oo ay ka mid yihiin qorshaha roadmap-ka, sameynta baarlamaanka cusub iyo dastuurka ee laga wado dalka, wuxuuna ku jawaabay;
“Wixii wanaag ah oo la wado tabar kasta ha yeeshee oo ummada wax u qabanaya wax kama qabno, waanwaafaqsanahay… laakiin waxaan aragnaa waxaan hadda socda inuusan ahayn wixii Soomaali dherjin lahaa ama daweyn lahaa ama qadaayaadkeeda [arimaheeda] sidii la rabay u soo celin lahaa inaysan ahayn.” ayuu yiri Sheekh Maxamed Axmed Garyare.
“… laakiin wax yar wax la’aan buu dhaamaa.., oo tallaabadii la qaado oo ummada wax loogu qabanayo ama Soomaalida ha qabsato ama caalamka kale ha qabtee waa waxaan soo dhoweynayno weeye.” ayuu ku sii daray hadalkiisa Sheekha.
Isbedelada Carabta ka dhacay iyo Soomaaliya
Su’aal ku saabsaneyd in Xarakada Al-Islaax ay ka faa’ideysaneyso isbedelada ka dhacay wadamada Carabta, gaar ahaan Masar iyo Tuunis oo ururada Islaamiga ee Ikhwaanul Muslimiin ay talada ku guuleysteen ayaa Sheekh Garyare wuxuu sheegay in ay tahay in marka hore ay isu diyaariyaan qaadista tallaabooyin la mid ah kuwa ka dhacay wadamada Carabta.
“Al-Islaax diyaar bey u tahay inay wadanka wax ka qabato oo wadanka si fiicana uga shaqeyso oo ay wax ka bedesho oo mabda’eedu waa mabda’a Islaamiga ah.. laakiin tallaabadaasi marka la qaadayo, waqtigaas isaga ah oo sida aad sheegtay wadamadaasi wax uga dheceen, waqtigaasi waa mar la is diyaariyey.” ayuu ku jawaabay Sheekh Maxamed Garyare.
HALKAN KA DHAGEYSO WAREYSIGA SHEEKH GARYARE
Cudurdaar; Sheekh Garyare waa masuul ka tirsan Xarakada Al-Iskaax, sidaasi darteed waxaan ka cudurdaaraneynaa in horey aanu ugu sheegnay gudoomiyaha ururka Al-Islaax.
Tags: Sheekh Maxamed Garyare: Xarakada Al-Islaax Ma Lahan Musharax Madaxweyne (Dhageyso Wareysi)	3 Responses for “Sheekh Maxamed Garyare: Xarakada Al-Islaax Ma Lahan Musharax Madaxweyne (Dhageyso Wareysi)”
ibrahim muhudin says:	June 13, 2012 at 11:18 am	Asc Amiga waxaan oranlahaa xarakada alislaax xubin kamid ah ayaa musharaxiinta Ida soo shArxaday kamid ah SaabS. Dr cabdiraxmaan baadiyow.
miidat says:	September 13, 2012 at 12:06 am	ciidan
XOG: Kooxda “Damu Jadiid” oo Qaadaneysa Wasaaradaha ugu Mumihsan Dawlada Cusub (Magacyo La Helay) | RBC Radio says:	October 9, 2012 at 1:51 am	[...] waxay ka mid ahaayeen raggii ugu horeeyay ee horbooday go’aankii kooxdu kaga goosatay ururka Al-Islaax (Qadiimka) markii Damu Jadiid ay la safatay garabkii Maxkamadaha Islaamiga ee hubeysnaa sanadkii [...]